Matrix Isi PDC Drill Bit factory na ndị na -eweta ya | DeepFast
9-1/2 sentimita asatọ
12-1/4 sentimita asatọ
Ọnụ ọgụgụ agụba
Nha nha isi
Isi cutter Qty
Nozzle Qty (ụdị)
Mpaghara oghere junk
Matrix Bits bụ ezigbo ihe ngwọta maka olulu mmiri nke ọma ebe iji obere iberibe nchara na -eduga n'iyi ngwa ngwa.
Nrụpụta ahụ matriks site na ihe mejupụtara nwere dabere na tungsten carbide na -enye ohere ka ibe wee gwuo egwu n'ụdị akwa abrasive site na iji apịtị na -egwu ala.
Ihe mejupụtara ihe pụrụ iche ahọpụtara na -enye ntụkwasị obi dị elu na ịdịte aka maka ọsọ bit na -aga n'ihu. Teknụzụ nrụpụta na imepụta ihe na -eme ka o kwe omume imepụta ọtụtụ ngwaọrụ mkpọpu ala.
Enwere ike ịba ụba ngwaọrụ matriks maka mweghachi. Njirimara a na-enye ohere ịbawanye oge ndụ ngwaọrụ yana nweta ọnụego dị elu.
Matrix Isi PDC Drill Bitdabara maka usoro siri ike na nke siri ike yana profaịlụ okpueze kachasị mma yana okirikiri nhọrọ nhazi. Ọ nwere ike nweta arụmọrụ ka mma na etiti etiti. Ogologo ndụ ọrụ yana ịrụ ọrụ dị elu na -enyere aka belata ọnụ ahịa mkpọpu ala.
Durasef nlele: Ngwongwo siri ike nke ukwuu na -akwalite nguzogide nlele iji bulie ogologo ndụ.
Hydraulic: Enwere ike ịkwalite mmegharị na ịjụ oyi nke ịkpụ site na nrụpụta hydraulic nke dabara na mgbawa na mwepụ nke agụba ọ bụla.
Ọdịdị agụba pụrụ iche: Ịbubata ezé na -egbu egbu pụrụ iche na imewe agụba pụrụ iche na -eme ka ikike igwu ala dị n'etiti.
Usoro nke matriks ntụ ntụ:Ikike nnwere onwe ọgụgụ isi nọọrọ onwe ya na teknụzụ na -akụda mmụọ dị elu emeela ka akụrụngwa matriks rute n'ọkwa dị elu nke mba ụwa. Enwere ike ịhazi agụba nke matriks ka ọ dị omimi ma dịkwa warara. Ọ nwere ike mejuo ọrụ mkpọmkpọ ebe dị mgbagwoju anya na olulu mmiri.
Koodu IADC M323
Ọnụ ọgụgụ agụba 6
ọnụ ọgụgụ nke nozzles 5
Mkpokọta Nchacha 36
Nha nha isi 1/2 "(16mm)
Ogologo nlele 2.0 "(50.8cm)
Mpaghara oghere junk 15.9 na2 Ogologo (102.6 cm)2)
Njikọ API 4-1/2 ”Reg.
Ngalaba arụmọrụ akwadoro:
Ọnụego ya 100 ~ 350 GPM / 21 ~ 35 L / S
Ọsọ Rotary 60 ~ 300 RPM
Ibu ibu na bit 3 ~ 15Klbs / 20 ~ 110 KN
Mix Ibu na bit 20Klbs / 90 KN
Otu Matrix Isi PDC Bit gbabara nke ọma na Layer Xujiahe
dị na Sichuan China.
Iji belata ọnụọgụ PDC Bit na -egwu mmiri na Xujiahe Layer na Sichuan nke China. Ndị na -emepụta bit bit nke China na -anwa imepụta nkwalite PDC dị mma iji gwuo egwu site na otu BIT.
Deepfast na -enye nke ya
Matrix Body PDC Bit 12 1/4 DF 1605BU iji mee ka ndụ mpekere dị ogologo ndụ.
Ọ na -edobe Roprecord ọhụrụ nke 7.13
The bit gbapuru ọma na oyi akwa site naanị Otu Bit
Ọ dị na Sichuan nke China. Nhazi ahụ bụ ihe siri ike mana ọ na-emebi emebi, ụlọ ọrụ Great Wall Drilling Company nke CNPC na-anwa ịbawanye eserese egwu ma belata ọnụọgụ PDC na Xujiahe Layer. N'ime oyi akwa a, omimi dị site na 1300 ruo 1900 na ike mkpakọ bụ 12000PSI-16000PS1. Deefast na -emepụta Matrix Body PDC Bit 12 1/4 "DF1605BU maka ọrụ a.
The Matrix Body PDC Bit 12 1/4 "DF 1605BU bụ ihe mepere emepe ka emebere nke ọma maka ịbawanye ike na ndụ nke ibe ibe. Usoro nke matriks ntụ ntụ nwere ikike ọgụgụ isi nwere onwe ya yana teknụzụ na -emebi emebi emeela ka arụ ọrụ nke matriks rute. Ọkwa dị elu nke mba ụwa.Ihe siri ike nke ukwuu na -akwalite nguzogide iyi iji kwalite ndụ ogologo oge.
Ọ na -enweta ROP kacha mma nke 10.61 m/h, na nkezi ROP nke ibe ise bụ 7.13 m/h.
Bits niile gbawara nke ọma na oyi akwa site na naanị otu Bit.
12 1/4 "Arụ ọrụ mkpọpu mmiri PDC
Nke gara aga: Matrix Isi PDC Drill Bit
Osote: Ngwaọrụ igwu mmiri abụọ na ogbo abụọ